8 Waxyaabood oo haweeney waliba ay ka dooneyso ninka ay rabto - Aayaha
Marka haweeney ay si dhab ah diyaar ugu tahay xiriir dhab ah oo mustaqbal leh ma ahan kan qarsoodiga ee gabdhaha qaar ay ciyaaraan, waa jira waxyaabo dhab ah oo ay ku qiimeyn lahayd ninkeeda.
Haweenka badanaa waxay qiimeeyaan nin jeclaanaya oo kalgacayl leh. Ragga badankood waa kuwo maalmahan ka been sheega jacaylka halka kuwo yar ay yihiin kuwo uu jacaylku dhab ka yahay, balse kuwa aanan kalgacaylka lahayn ma doonayaan haweenka.
Haweeney kasta waa mid rabta jacayl mana ahan jacayl uun balse “jacayl dhab ah”, waxaana iska cad in ninka marka uu jacayl uu qabo gabar uu dhib walbo marayo si gacalisadiisa uu uga farxiyo.
Jacaylku waa micno badanyahay, sidoo kale dareenka ayaa ah wax kale oo haweeney kasta ay rabto ninkeeda.
Micnaha dareenka ayaa ah isfaham iyo inaad fahmi karto dareenka gacalisadaada; marka ay faraxsantahay, marka ay murugsantahay, dareenka ayaa ah in ninka uu garan karo dareenka xaaskiisa iyo marxaladda ay markaas ku jirto.
Ragga badankood way ka baqaan go’aanka halka haweenka badankood ay u baahi qabaan nin ay ka go’antahay guur mustaqbal leh.
Badanaa raga ayaa ah kuwo door bida inay gabadha heystaan muddo yar oo aysan xiriir mustaqbal leh la yeelan.
Gabar kasta waa mid rabta inay guursato nin ay ka go’antahay mustaqbal balse guur kaas ayaa waxa uu ku yimaadaa xiriir dhab ah iyo in qofka uu yahay mid mustaqbal raba. Haddii ninka aysan ka go’neyn xiriir dhab ah dabadeed xiriirkaas meel ka gaarayo.
Haweenka waa kuwo neceb raga beenta u saaxiibka ah ee aan daacadda ah isla markaana ka been sheega hadalladooda iyo ficilladooda.
Haweeney kasta waa mid qiimeyso ninka daacadda u ah, daacadnimada waa guusha xiriirka.
Ninka shaqeysta oo biilasha bixin kara
Inkastoo raga badanaa aysan jecleyn tan balse waa mid dhab ah. Ma jirto gabar rabta nin aanan ugu yaraan soo shaqeyn Karin raashinka guriga sidaa darted taas micnaheeda ayaa ah in lacagta ay had iyo jeer qorshaha qeyb ka tahay.
Ninka leh karti uu ku bixiyo qaar kamid ah biilasha waa midka ay haweeney kasta rabi lahayd, hora loo yiri shaqeystaa sharaf leh.
Ninka ku wanaagsan sariirta
Tani waa mid kamid ah waxyaabaha ay dumarka ku qiimeeyaan raga sababtoo ah waa haweeney kasta waa mid rabta inay sariirta lagu qanciyo oo aysan walaac ka qaadin.
Waa jahwareer markaad ninkaaga ka hesho wax kasta aad u baahantahay balse uusan kugu qanci Karin sariirta.
Qaar kamid ah guurarka ayaa u burbura xushmad la’aan sababtoo ah haddii labada lamaane ee dadka iskugu dhow ay is xushmeyn waayaan xiriirkaas ma ahan mid sii jiraya, xushmad waa mid kamid ah tiirarka uu ku taagnaa karo guurka waana mid waajib ku ah labada lamaane.
Gabar kasta waa mid rabta nin xushmeynaya isla markaana la wadaagaya go’aanada.
Haa, aaminaada waa in mar kasta ay qeyb ka noqotaa liiska sababtoo ah tani waa mid kamid ah waxyaabaha ay haweeneyda si dhab ah uga rabto ninkeeda.
Ma jirto haweeney rabta nin qiyaanaya oo raacaya gabar kasta uu wadada ku arko.